ပိတ်ရက်မှာ လည်ပတ်ဖို့ ဒီပွဲလေးတွေ ရှိပါတယ်နော်! - For her Myanmar
ယောင်းတို့ရေ…ဒီတစ်ပတ်ပိတ်ရက်မှာရော ဘယ်တွေသွားဖို့ကြံစည်ထားပြီးပြီလဲ။ ပိတ်ရက်တွေရောက်တိုင်း ပွဲတွေကဆက်တိုက်ပဲဆိုတော့ ဘယ်သွားရမလဲ ဗျာများနေမှာအသေအချာပဲ။ ဒီလိုများပြားလှတဲ့ပွဲတွေထဲက ယောင်းတို့အကြိုက်နဲ့ထပ်တူကျနိုင်မယ့်ပွဲလေးတွေကို ဟောဒီက မင်မင် ရွေးထုတ်ပေးထားပါတယ်နော်။
Cover Song လေးတွေကို ပရိသတ်ရင်ထဲရောက်အောင်ဆိုပြတတ်တဲ့ TheFour အဖွဲ့ဆို ယောင်းတို့ကောင်းကောင်းကြီးသိမှာပါ။ ဒီပွဲလေးကတော့ TheFour အဖွဲ့ရဲ့ သီဆိုဖျော်ဖြေမှုတွေကို မြက်ခင်းပေါ်မှာ လွတ်လွတ်လပ်လပ် အားပေးနားဆင်နိုင်မယ့်ပွဲလေးပါ။ “A Sunset Melody” ပွဲလေးကိုတော့ မတ်လ ၁၆ ရက်နေ့ ညနေ(၅)နာရီ အချိန် Yangon Sailing Club (YSC) မှာပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ပြင်ပအစားအစာတွေတော့ ယူလို့ရမှာမဟုတ်ဘဲ အတွင်းမှာ စားချင်စဖွယ်ဆိုင်လေးတွေ တည်ခင်းထားပေးထားမှာဖြစ်တဲ့အပြင် Mini-bar လည်းရှိဦးမှာဆိုတော့ အပီအပြင်ဂေါ်လို့ရနိုင်မယ့် ပွဲလေးပါ။ ပထမဆုံးရောက်မယ့် အယောက် ၁၃၀ အတွက် TheFour တံဆိပ်ပါ Picnic Blanket ကို
လက်ဆောင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီး Ticket တစ်စောင်တိုင်းမှာလည်း Complementary drink ပါဦးမှာနော်။
ညနေ ၅:၀၀ နာရီမှစပြီး တံခါးဖွင့်မှာဖြစ်ကာ ၅:၃၀ အတိမှာ စဖျော်ဖြေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပရိတ်သတ် ၄၀၀ ပဲ လက်ခံသွားမှာဖြစ်ပြီး လူပြည့်ပြည့်ချင်း တံခါးပိတ်လိုက်မှာဖြစ်လို့ စောစောသွားဖို့တော့လိုမယ်နော်။
Related article>>> Kpop Idolတို့ရဲ့ ပွဲဦးမထွက်ခင်က ဓာတ်ပုံများ
အသေးစိတ်သိချင်ရင်တော့ ဒီ Link မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်နော်။
ဒီကျန်းမာရေးဟောပြောပွဲ လေးကတော့ သဘာဝအတိုင်း နည်းမှန်နဲ့ ဝိတ်ချချင်တဲ့သူတွေ ၊ ဝိတ်ချနေတဲ့သူတွေ၊ Gym ကစားတဲ့သူတွေ နှင့် ရောဂါအခံ တစ်ခုခုကြောင့် ဝိတ်ချရန်လိုအပ်တဲ့သူတွေ အတွက် ရည်ရွယ်ပြီးကျင်းပပေးတဲ့ ပွဲလေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ ဝိတ်ချရအောင် ဟောပြောပွဲ လေး မှာတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပထမဦးဆုံး အစားအသောက်နှင့် အာဟာဆိုင်ရာ အထူးကုဆရာဝန်ကြီး ဒေါက်တာအောင်ဖုန်းဇော်ကနေ အစားအသောက်နဲ့ဘယ်လိုမျိုး ဝိတ်ချလဲဆိုတာရှင်းပြသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Related article>>>ဘွဲ့ယူတဲ့အခါ ပွဲတိုးဖို့ ချိတ်ပဲ ဝတ်စရာရှိတာလား?
ဒေါက်တာအောင်ဖုန်းဇော် ဒီ ကျန်းမာရေးဟောပြောပွဲ လေးမှာ အဓိက သင်ပေးသွားမယ့် သင်ခန်းစာများကတော့
ကိုယ့်ရဲ့ လိုချင်တဲ့ ဝိတ်အပေါ်မူတည်ပြီး နေ့စဉ်စားရမယ့် အစားအသောက်ပမာဏ တွက်နည်း
အစားအစာများမှာပါဝင်တဲ့ Calories ပမာဏ ကြည့်နည်း
ကိုယ့်ရဲ့Diet အတွက် နေ့ စဉ်၊ အပတ်စဉ်၊ လစဉ် Meal Plan ဆွဲနည်း
အစားအသောက် နှင့် ဝိတ်ချနည်း အစရှိတဲ့ နည်းများကို စနစ်တကျသင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်
ဒီကျန်းမာရေးဟောပြောပွဲလေး ကိုတော့ မတ်လ(၆)ရက်နေ့ Sule Shangri-La ဟိုတယ်မှာ နေ့လည်(၁)နာရီကနေ ညနေ(၄)နာရီထိ ကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ အသေးစိတ်သိချင်ရင်တော့ ဒီ Link မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်နော်။
နာမည်လေးကထူးဆန်းသလို ပွဲလေးကလည်း တကယ့်ကိုထူးခြားလွန်းပါတယ်။ ပြည်​တွင်းပြည်​ပ ကအဆိပ်​သင့်​ မုန့်​ပဲသွား​ရည်​စာတွေကို မြန်မာ တိုင်းရင်းသားရိုးရာ မုန့်ပဲသွား​ရည်​စာတွေနဲ့ ခုခံတိုက်​ခိုက်​မယ်ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ​မှော်​ဘီမြို့မ​ဈေး​ရှေ့မှာ မတ်လ(၁၇)ရက်နေ့ ညနေ(၅)နာရီကနေ ည(၉)နာရီအထိ ကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီပွဲလေးမှာ ရောင်းချသွားမယ့် ရိုးရာမုန့်တွေကိုတော့ အ​ရောင်​ဆိုး​ဆေး၊ ဆေးသကြား ၊
ဓာတုပစ္စည်း၊ ကြာရှည်​ခံ​ဆေးများ လုံးဝအသုံးမပြုသလို ဖော့ဘူး ၊ ကြွပ်ကြွပ်အိတ်တွေကိုလည်း အသုံးပြုခွင့်မပြုပါဘူး။ ဒေသအသီးသီးက နာမည်ကြီးရိုးရာမုန့်တွေကို တစ်နေရာတည်းမှာ စားသုံးနိုင်မယ့် အခွင့်အရေးမို့ လက်လွှတ်မခံသင့်တဲ့ ပွဲလေးပါပဲ။ အသေးစိတ်သိချင်ရင်တော့ ဒီ Link မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်နော်။
ကဲ… မင်မင်ရွေးချယ်ပေးထားတဲ့ပွဲလေးတွေက ယောင်းတို့အကြိုက်နဲ့ ထပ်တူကျနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်နော်။ ယောင်းတို့အကြိုက်ဆုံးပွဲလေးကိုရွေးချယ်ပြီး ပျော်စရာကောင်းတဲ့ပိတ်ရက်တွေကို ကုန်ဆုံးနိုင်ကြပါစေနော်။
ဒီတဈပတျပိတျရကျမှာရော ဘယျတှသှေားဖို့ကွံစညျထားပွီးပွီလဲ။ ပိတျရကျတှရေောကျတိုငျး ပှဲတှကေဆကျတိုကျပဲဆိုတော့ ဘယျသှားရမလဲ ဗြာမြားနမှောအသအေခြာပဲ။ ဒီလိုမြားပွားလှတဲ့ပှဲတှထေဲက ယောငျးတို့အကွိုကျနဲ့ထပျတူကနြိုငျမယျ့ပှဲလေးတှကေို ဟောဒီက မငျမငျ ရှေးထုတျပေးထားပါတယျနျော။
Cover Song လေးတှကေို ပရိသတျရငျထဲရောကျအောငျဆိုပွတတျတဲ့ TheFour အဖှဲ့ဆို ယောငျးတို့ကောငျးကောငျးကွီးသိမှာပါ။ ဒီပှဲလေးကတော့ TheFour အဖှဲ့ရဲ့ သီဆိုဖြျောဖွမှေုတှကေို မွကျခငျးပျေါမှာ လှတျလှတျလပျလပျ အားပေးနားဆငျနိုငျမယျ့ပှဲလေးပါ။ “A Sunset Melody” ပှဲလေးကိုတော့ မတျလ ၁၆ ရကျနေ့ ညနေ(၅)နာရီ အခြိနျ Yangon Sailing Club (YSC) မှာပွုလုပျသှားမှာဖွဈပါတယျ။
ပွငျပအစားအစာတှတေော့ ယူလို့ရမှာမဟုတျဘဲ အတှငျးမှာ စားခငျြစဖှယျဆိုငျလေးတှေ တညျခငျးထားပေးထားမှာဖွဈတဲ့အပွငျ Mini-bar လညျးရှိဦးမှာဆိုတော့ အပီအပွငျဂျေါလို့ရနိုငျမယျ့ ပှဲလေးပါ။ ပထမဆုံးရောကျမယျ့ အယောကျ ၁၃၀ အတှကျ TheFour တံဆိပျပါ Picnic Blanket ကိုလကျဆောငျပေးသှားမှာဖွဈပွီး Ticket တဈစောငျတိုငျးမှာလညျး Complementary drink ပါဦးမှာနျော။ညနေ ၅:၀၀ နာရီမှစပွီး တံခါးဖှငျ့မှာဖွဈကာ ၅:၃၀ အတိမှာ စဖြျောဖွပေေးမှာဖွဈပါတယျ။ ပရိသတျ ၄၀၀ ပဲ လကျခံသှားမှာဖွဈပွီး လူပွညျ့ပွညျ့ခငျြး တံခါးပိတျလိုကျမှာဖွဈလို့ စောစောသှားဖို့တော့လိုမယျနျော။
Related article>>> Kpop Idolတို့ရဲ့ ပှဲဦးမထှကျခငျက ဓာတျပုံမြား
အသေးစိတျသိခငျြရငျတော့ ဒီ Link မှာဝငျရောကျကွညျ့ရှုနိုငျပါတယျနျော။
ဒီကနျြးမာရေးဟောပွောပှဲ လေးကတော့ သဘာဝအတိုငျး နညျးမှနျနဲ့ ဝိတျခခြငျြတဲ့သူတှေ ၊ ဝိတျခနြတေဲ့သူတှေ၊ Gym ကစားတဲ့သူတှေ နှငျ့ ရောဂါအခံ တဈခုခုကွောငျ့ ဝိတျခရြနျလိုအပျတဲ့သူတှေ အတှကျ ရညျရှယျပွီးကငျြးပပေးတဲ့ ပှဲလေးဖွဈပါတယျ။ ဒီ ဝိတျခရြအောငျ ဟောပွောပှဲ လေး မှာတော့ မွနျမာနိုငျငံရဲ့ ပထမဦးဆုံး အစားအသောကျနှငျ့ အာဟာဆိုငျရာ အထူးကုဆရာဝနျကွီး ဒေါကျတာအောငျဖုနျးဇျောကနေ အစားအသောကျနဲ့ ဘယျလိုမြိုး ဝိတျခလြဲဆိုတာရှငျးပွသှားမှာ ဖွဈပါတယျ။
ဒေါကျတာအောငျဖုနျးဇျော ဒီ ကနျြးမာရေးဟောပွောပှဲ လေးမှာ အဓိက သငျပေးသှားမယျ့ သငျခနျးစာမြားကတော့
ကိုယျ့ရဲ့လိုခငျြတဲ့ ဝိတျအပျေါမူတညျပွီး နစေ့ဉျစားရမယျ့ အစားအသောကျပမာဏ တှကျနညျး
အစားအစာမြားမှာပါဝငျတဲ့ Calories ပမာဏ ကွညျ့နညျး
ကိုယျ့ရဲ့ Diet အတှကျ နစေ့ဉျ၊ အပတျစဉျ၊ လစဉျ Meal Plan ဆှဲနညျး
အစားအသောကျ နှငျ့ ဝိတျခနြညျး အစရှိတဲ့နညျးမြားကို စနဈတကသြငျကွားပေးသှားမှာဖွဈပါတယျဒီကနျြးမာရေးဟောပွောပှဲလေး ကိုတော့ မတျလ(၆)ရကျနေ့ Sule Shangri-La ဟိုတယျမှာ နလေ့ညျ(၁)နာရီကနေ ညနေ(၄)နာရီထိ ကငျြးပပွုလုပျသှားမှာဖွဈပါတယျ။
နာမညျလေးကထူးဆနျးသလို ပှဲလေးကလညျး တကယျ့ကိုထူးခွားလှနျးပါတယျ။ ပွညျတှငျးပွညျပ ကအဆိပျသငျ့ မုနျ့ပဲသှားရညျစာတှကေို မွနျမာ တိုငျးရငျးသားရိုးရာ မုနျ့ပဲသှားရညျစာတှနေဲ့ ခုခံတိုကျခိုကျမယျဆိုတဲ့ ရညျရှယျခကျြနဲ့ မှျောဘီမွို့မဈေးရှမှေ့ာ မတျလ(၁၇)ရကျနေ့ ညနေ(၅)နာရီကနေ ည(၉)နာရီအထိ ကငျြးပပွုလုပျသှားမှာ ဖွဈပါတယျ။
ဒီပှဲလေးမှာ ရောငျးခသြှားမယျ့ ရိုးရာမုနျ့တှကေိုတော့ အရောငျဆိုးဆေး၊ ဆေးသကွား ၊ဓာတုပစ်စညျး၊ ကွာရှညျခံဆေးမြား လုံးဝအသုံးမပွုသလို ဖော့ဘူး ၊ ကွှပျကွှပျအိတျတှကေိုလညျး အသုံးပွုခှငျ့မပွုပါဘူး။ ဒသေအသီးသီးက နာမညျကွီးရိုးရာမုနျ့တှကေို တဈနရောတညျးမှာ စားသုံးနိုငျမယျ့ အခှငျ့အရေးမို့ လကျလှတျမခံသငျ့တဲ့ ပှဲလေးပါပဲ။
ကဲ… မငျမငျရှေးခယျြပေးထားတဲ့ပှဲလေးတှကေ ယောငျးတို့အကွိုကျနဲ့ ထပျတူကနြိုငျလိမျ့မယျလို့ ယုံကွညျပါတယျနျော။ ယောငျးတို့အကွိုကျဆုံးပှဲလေးကိုရှေးခယျြပွီး ပြျောစရာကောငျးတဲ့ပိတျရကျတှကေို ကုနျဆုံးနိုငျကွပါစနေျော။
Tags: Events, Fun, gym, how to reduce weight, thefour show
Yin Sandi Ko March 13, 2019